Virgo tattoo, zvinoreva uye mamwe mazano | Kunyora
Virgo tattoo, zvinoreva uye mamwe mazano
Un tattoo Virgo yakanaka kune avo vari Virgo... asiwo kune avo vane yakakosha Virgo muhupenyu hwavo.
Muchikamu chino tichaona zvinorehwa neiyi horoscope uye mamwe mazano atinogona kukurudzirwa nawo kuwana yedu yakanaka dhizaini.
1 Ndiani iye asinganzwisisike mukadzi?
2 Chero mazano
Ndiani iye asinganzwisisike mukadzi?
Iye protagonist wechiratidzo ichi chezodhiac mukadzi, sezvatinoona mumabasa mazhinji ehunyanzvi (uye horosikopu mumapepanhau) zvichibva paVirgo. Zvisinei, Tinoziva here kuti mukadzi uyu ndiani?
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti zvinhu zvinoshanduka zvinoenderana nengano yatiri kubata nayo. Mune zvimwe zviitiko, Virgo inomiririra Astria (iyo muchiGreek inogona kuturikirwa se'mukadzi nenyeredzi '), mwanasikana waAstreo naEos, vamwari vemadekwana nemambakwedza zvakateedzana muGirisi yekare. Astria ndiye mwarikadzi wekusava nemhosva, kururamisira uye kuchena, uye zvinonzi ndiye aive wekupedzisira kukwira kuenda kuOlympus pakupera kweSilver Age, apo vanamwari pavakasiya Nyika vachitsvaga imba yavo yekudenga.
Pane kudaro, kune avo vanorondedzera boka renyeredzi kukohwa nezviyo, savaRoma, avo vakamurondedzera kuna Demeter; vaSumeriya, vaitenda kuti zvaimiririra mwarikadzi Shala, kana vaIjipita, avo vairondedzerawo boka renyeredzi kukohwa.
Kuti uwane tattoo yeVirgo isiri yakanaka chete, asi yakakosha chaizvo, une mazano akati wandei ekukurudzira kubva. Izvo zvakapusa zvinosanganisira, semuenzaniso, mucherechedzo weVirgo (iyo mhando yememe ine muswe) kana boka renyeredzi.
Kuti uwane mamwe magadzirirwo akawandisa, unogona kusarudza kumiririra chimwe chezviitiko zvemusikana uyu uye nekurudziro kubva kune zvimwe zvetsika yake yemaitiro. Iyo inotonhorera pfungwa kune hombe dhizaini, semuenzaniso, ingave iri yakajeka dhizaini mune iwo maitiro art nouveau naMucha.
Isu tinovimba iwe wakafarira uye kufemera ichi chinyorwa kune rako ramangwana virgo tattoo. Tiudze, waiziva here iyi ngano? Une tattoo yemaitiro aya here? Regai tizive mune zvakataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Virgo tattoo, zvinoreva uye mamwe mazano
Kuboora rook, mibvunzo nemhinduro zveyakanyanya mhete mhete
Iyo septum yekunyepedzera, unogona kuiwana?